Xinhua Myanmar - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း COVID-19 ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၃ သန်းကျော်ရှိလာ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း COVID-19 ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၃ သန်းကျော်ရှိလာ
ဘရာဇီးနိုင်ငံ ဆောပိုလိုမြို့၌ ဧပြီ ၇ ရက် National Journalists နေ့တွင် ဆောပိုလိုပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Joao Doria ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြီးနောက် သတင်းထောက်တစ်ဦးအား COVID-19 အခမဲ့ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပေးနေစဉ် (ဆင်ဟွာ) WORLD
နယူးယောက် ၊ ဧပြီ ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း COVID-19 ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူမှာ ဧပြီ ၁၇ ရက်တွင် ၃ သန်းကျော်လွန်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် သိပ္ပံ နှင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန(CSSE) ထံမှ သိရသည်။
CSSE ၏ အချက်အလက်များအရ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီ ၂၁ မိနစ် (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ၁၂၂၁ နာရီ) အထိ ကမ္ဘာအနှံ့တွင် စုစုပေါင်း ရောဂါဖြစ်ပွားသူ သန်း ၁၄၀ ကျော်နှင့်အတူ သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ ၃,၀၀၁,၈၉၂ ဦးအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် အဆိုးရွားဆုံး ခံစားနေရသည့်နိုင်ငံအဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ ၃၁,၅၆၇,၇၄၄ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၅၆၆,၂၄၀ ဦး ရှိကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရောဂါဖြစ်ပွားသူ လူဦးရေ၏ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော် နှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး သေဆုံးသူ အရေအတွက်၏ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံ၌ သေဆုံးသူမှာ ၃၆၈,၇၄၉ ဦး ရှိခဲ့ပြီး ယင်းနောက်တွင် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသည် သေဆုံးသူ ၂၁၁,၆၉၃ ဦးဖြင့် ကမ္ဘာ့တတိယ သေဆုံးသူအများဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။သေဆုံးသူ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော် ရှိသော နိုင်ငံများတွင်လည်း အိန္ဒိယ ၊ ဗြိတိန် ၊ အီတလီ ၊ ရုရှား နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့ ပါဝင်ကြောင်း CSSE ထံမှ သိရသည်။ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း COVID-19 ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ၁ သန်းပြည့်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် ၂ သန်းထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
NEW YORK, April 17 (Xinhua) -- Global COVID-19 deaths surpassed3million on Saturday, according to the Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University.
The global death toll rose to 3,001,892, withatotal of more than 140 million cases worldwide as of 8:21 a.m. local time (1221 GMT), the tally compiled by the center showed.
The United States remains the worst-hit nation, with 31,567,744 cases and 566,240 deaths, accounting for more than 22 percent of the global caseload and more than 18 percent of the global death toll.
Brazil recorded 368,749 deaths, followed by Mexico with the world's third largest fatalities of 211,693.
Countries with over 100,000 fatalities also include India, Britain, Italy, Russia and France, according to the center.
Global COVID-19 deaths reached the grim milestone of 1 million on Sept. 28, 2020, and hit2million on Jan. 15, 2021. ■
PHOTO - A journalist receivesafree PCR COVID-19 test afterapress conference with Sao Paulo State Governor Joao Doria on the National Journalists Day in Sao Paulo, Brazil, April 7, 2021. (Xinhua/Rahel Patrasso)
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံထုတ် CoronaVac ကာကွယ်ဆေးက အလွန်ထိရောက်မှုရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့ဟု ချီလီတာဝန်ရှိသူ ပြောကြား
Next Article တရုတ်နိုင်ငံမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးသော ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယအသုတ် အီရတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ